उडी जाउँ भने सरकारले नआउन भन्यो, बस्नलाई छैन भिसा! – Everest Pati
सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि सेतोपाटीले फेसबुकमा राखेको प्रश्नमा उक्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले विभिन्न समस्याहरु देखाएका छन्। अधिकांशले आफ्नै देश फर्किन नपाउने गरी निर्णय गर्नु गलत भएको बताएका छन्। त्यस्तै कतिपयले आफ्नो व्यक्तिगत समस्या प्रस्तुत गरेका छन्।
‘अनि कतार सरकारले लखेटे कुन दुलोमा जाने हामी नेपाली? उसै त मार्केट जाने क्रममा समाते २५० जना नेपाल पठाइसक्यो,’ हाल कतारमा रहेका मणि लामाले लेखेका छन्। विदेशमा भएका नेपालीहरूले सरकारले आफ्नै नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाउनुअघि सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
‘अप्रिल १ को लागि टिकट लिएको करिब १ महिना भन्दा बढी भयो! अन्य मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै देशमा फिर्ता बोलाएर क्वारेन्टाइनमा बस्न सुझाव दिएका छन्। नेपालले हामीजस्ता नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी निर्णय गर्दा थोरै सोच्नु पर्ने हो। अर्कोतर्फ रोग लाग्नभन्दा सावधानी अपनाएको कुरा पनि स्वागतयोग्य छ,’ हाल कतारमा भएका सुरेश बरालले लेखेका छन्।
काेराेना त्रास : काठमाडाैं उपत्यकाबाट बाहिरिने क्रम बढ्यो